स्विजरल्याण्डको रेल भित्र फेला परेका एक लाख ८२ हजार स्विस फ्र्यांक (करिब दुई करोड ३३ लाख छ हजार नौ सय रुपियाँ) मूल्यका सुनका पट्टीहरु कसैले दाबी नगरेपछि स्विजरल्याण्ड सरकारले सुन धनी खोज्न सार्वजनिक आव्हान गरेको छ ।...
यूरोप वा संयुक्त राज्य अमेरिका उपचारका लागि जहाजमा उफ्रिने बानी परेको छ अफ्रिकी महादेशका अधिकांश राजनीतिज्ञहरूहरुलाई । तिनले दशकौंदेखि आफ्नो देशको सडक, अस्पताल, शिक्षा, खानेपानी आदिमा लगानी गरेका छैनन् । बरु आफ्नो देशमा गर्नुपर्ने लगानी माल्टा, कर्स...
सधैं चर्चामा आइरहने डा. गोबिन्द केसी यस्तो संकटका बेला कहाँ छन् होला ? कतै लुकेर बसेका छन् ? सेवामा हुँदा चर्चामा आइरहने उनी सेवा निब्रित्त भएपछि सबै छोडेर चुपचाप बसेका हुन् ? पटक्कै होइनन् । उनी सुदूरपस्चिमका...
-रायन सुबेदी मानव सभ्यताको बिकाससँगै बिज्ञानको बिकासले कुनैबेला अपार ठानिएको विश्व अहिले एऊटा गाऊँ जस्तै भएको छ । आकासवाणी र हुलाकी समयको सूचना प्रबिधीमा महिनौ पछि पुग्ने समाचारहरू अहिले घटनाक्रमसँगै संसारभरी फैलिने गर्दछ । कोरोना जस्ता संक्रमणहरू...
फ्रेब्रवरी १६, २०२०
-प्रविण भट्टराई / दोहा, कतार एक पटक प्रोटोकल, यानर एतिकेत एण्ड मोर नामक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने क्रममा ड्रेस कोड वा प्रोटोकलको बारेमा २ शव्द राख्न आयोजकबाट आग्रह भयो । जान्दै नजानेको बिषयमा बोल्न सजिलो हुन्न । तर...
अहिलेपनि स्विजरल्याण्ड धनी देश हो । तर यहाँपनि गरिबहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । सन् २०१७ मा छ लाख ७५ हजार स्विस नागरिकले गरिबीको समस्या भोगे । ति मध्ये एक लाख वालवालिका थिए । यसको असर...
आवश्यक छ प्रवासमा दिनहु नयाँ संस्थाको ?
-बाबा राजेश्वरी थापा / भियना, अस्ट्रिया हातका औंलाले गनेर भ्याउने संख्यामा छन नेपालीहरु अस्ट्रियामा । तर यति थोरै जनसंख्या भएको समाजमा दिनहुँ संस्था खोल्नु भनेको समाज भाड्न सिंन्डिकेटको प्रक्रिया लागु गर्नु सरह हो । कतिपय सामुदायिक संस्था...